स्यानिटरी प्याडवारे देशको एउटा पूर्व प्रमले फेसबूक मार्फत चर्चा गर्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला : डा. भट्टराई – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
स्यानिटरी प्याडवारे देशको एउटा पूर्व प्रमले फेसबूक मार्फत चर्चा गर्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला : डा. भट्टराई
२०७४, १२ माघ शुक्रबार ०९:१४
काठमाडौँ । महिलाहरूले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडवारे देशको एउटा पूर्व प्रमले फेसबूक मार्फत चर्चा गर्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला, रिस उठ्ला! एक छिन पर्खनोस् भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्नुभएको छ ।
उहाँले भारतीय गणतन्त्रदिवसको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय राजनीतिवारे बुझ्ने मनसायले टिभी च्यानल चाहार्दै जाँदा ZEENEWS को एउटा कार्यक्रमले मनमस्तिकमा नराम्रो झट्का दियो! भन्दै महिलाको ठुलो समस्याको बारेमा लिदै आएको महिनावारी र यसको समस्याको बारेमा सचेतना फैलाउने प्रयास गरेका छन् ।
उहाँले लेख्नुहुन्छ “भारतका ४० करोडमध्ये १२% महिलाले मात्र महिनावारी भएका वेला सुरक्षित स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्दा रहेछन्; बाँकी ८८% ले फोहोर कपडा, पराल, खरानी आदि प्रयोग गर्दा रहेछन्। जसका कारणले ७०% लाई विभिन्न यौनांगजन्य रोग लाग्दो रहेछ! २४% किशोरीहरू महिनावारी भएका वेला स्कूल नजादारहेछन्।”
अब सोच्न ढिलो र आलटाल नगरौं! क्रान्ति, परिवर्तन, समृद्धि यस्तै ‘झिनामसिना’ र ‘अप्रिय’ कुराबाटै शुरू हुन्छन् भन्ने नभुलौं!! आगे जो मर्जी!! भन्दै ट्वीट गर्नुभएको छ ।
यो सानो कुराले हाम्रो समाज बदलिने कुरामा बिश्वास गर्दै यसका लागि जनचेतना फैलाउने कुरा गर्नुभएको छ ।